Spin and Win | Telenor Myanmar
‘ရှယ်Spinရှယ်Win Luckyဗားရှင်း’ အစီအစဥ်မှာပါဝင်ပြီး အင်တာနက်ဒေတာဆုလက်ဆောင်၊ SMS လက်ဆောင်တွေအပါအဝင် ဖုန်း Handset ၊ Bluetooth Speaker ၊ Power Bank တို့သာမက Pizza Hut ၊ City Mall Online ၊ Cookie TV ၊ Remax နဲ့ Giodano တို့ရဲ့ Discount Coupon တွေကိုပါ ရယူလိုက်ပါ။
MyTelenor app မှတဆင့် အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ပြီး ‘ရှယ်Spinရှယ်Win Luckyဗားရှင်း’ အစီအစဉ်တွင် ပါ၀င်နိုင်ပါသည်။
၂. MyTelenor App သို့ဝင်ရောက်ပါ။
၃. Home Page ပေါ်ရှိ banner အားနှိပ်ပြီး Spin Count များ ရယူပါ။
၄. Game အား ဆော့ကစားပြီး ချက်ချင်းပေါက် ချက်ချင်းယူဆုများ ရယူပါ။
SMS မှတဆင့် ရရှိထားသော Coupon Code အား Copy ပြုလုပ်ပြီး အထက်ပါ အဆင့်အတိုင်း Cookie TV အက်ပလီကေးရှင်းတွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
Discount coupon အား SMS မှ တဆင့် ရရှိပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက် သက်ဆိုင်ရာ ဆိုင်ခွဲတွင် Coupon Code အား ပြသပြီး လျှော့ဈေးခံစားခွင့်အား ရယူနိုင်ပါတယ်။
What is shal shake and how to involve?
၁။ တယ်လီနောမြန်မာ (“တယ်လီနော”) မှ Spin & Win ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် (“ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်”) ကာလမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ ရက် ၂၀၂ဝခုနှစ်တွင် စတင်ပြီး မတ်လ ၂၇ ရက် ၂၀၂ဝခုနှစ်အထိ (သက်မံသက်တမ်းတိုးရန် မကြော်ငြာသရွေ့) (“ကံစမ်းမဲ ကာလ”) ဖြစ်သည်။ တယ်လီနော ဝန်ဆောင်မှု သုံးစွဲသူများမှ Spin Counts များအား မတ်လ ၂၇ ရက် ၂၀၂ဝခုနှစ် ည ၂၃နာရီ ၅၉ မိနစ် (မြန်မာ စံတော်ချိန်) မတိုင်မီ သုံးစွဲရမည်ဖြစ်သည်။ ကံစမ်းမဲ ကာလ ကျော်လွန်သည်အထိ မသုံးစွဲရသေးသော Spin Counts များမှာ ဤ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်နှင့် အကျုံး မဝင်ပေ။ ကံစမ်းမဲ ကာလအား တယ်လီနောမှ မိမိတဦးတည်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် အချိန်မရွေး ပြင်ဆင် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၂။ ဤ ကံစမ်းမဲ အစီစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းမှ တယ်လီနော Spin & Win ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် ၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း များ (“စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ”)၊ ပြင်ဆင်ချက်များ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား လိုက်နာရန် သဘောတူညီသည်ဟု မှတ်ယူမည် ဖြစ်သည်။ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား ပြင်ဆင်မှု တစုံတရာ ရှိပါက My Telenor application မှတဆင့် ကြော်ငြာ မည် ဖြစ်ပြီး ကြော်ငြာသည်နှင့် တပြိုက်နက် အကျိုးသက်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။ တယ်လီနောမှ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အစားထိုးခြင်း အပါအဝင် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား ပြောင်းလဲခွင့် ရှိသည်ဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲချက်အား ကြော်ငြာသည်နှင့် တပြိုက်နက် အကျိုး သက်ရောက်မည် ဖြစ်သည်။ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သူများ အနေဖြင့် ဤ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတိုင်း လိုက်နာ လုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူညီသည် မှတ်ယူခြင်း ခံရမည်ဖြစ်သည်။
ကံစမ်းဆုမဲ တစ်ခုကိုဆွတ်ခူးရရှိပြီးသူ အပါအဝင်၊ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်သည့် မည်သူနှင့်စပ်လျင်း၍ မဆို တရားဝင် အတည်ဖြစ်မှုအား တယ်လီနောမှ မိမိတစ်ဦးတည်းသဘောဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်းအား တားမြစ်ထားသူများ မှ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်အား ကံထူးခဲ့ပါက လက်ဆောင် ပစ္စည်းများ အား တယ်လီနောမှ မိမိသဘော ဖြင့် ပြန်လည်သိမ်းယူခွင့်နှင့် ပယ်ဖျက်နိုင်ခွင့်တို့ရှိသည်။
၅။ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်းအား တားမြစ်ထားသူများ မဟုတ်သည့် တယ်လီနော ဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူ များသည် တယ်လီနော ၏ မည်သည့် ပက်ကေ့ချ် မဆို MyTelenor App, Web, USSD, SMS နှင့် E-load တို့မှဝယ်ယူပြီး ဤကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်မည် ဖြစ်သည။် (“ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိသူ”) ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိသူသည် ပက်ကေ့ချ် ဝယ်ယူသည့် ငွေပမာဏအလိုက် ကံစမ်းမဲ ကာလတွင် ကံစမ်းမဲလက်မှတ်များအား ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်သော ကံစမ်းမဲလက်မှတ် အရေအတွက်မှာ အောက်ပါ အတိုင်းဖြစ်သည်။
o ၄၉၉ကျပ် နှင့်အောက် = ကံစမ်းခွင့်လက်မှတ် (Spin Coupon) ၁ ခု
o ၅ဝဝကျပ် နှင့် ၉၉၉ ကျပ် ကြား= ကံစမ်းခွင့်လက်မှတ် (Spin Coupon) ၂ ခု
o ၁ဝဝဝကျပ် နှင့် ၃၀၀၀ ကျပ် ကြား= ကံစမ်းခွင့်လက်မှတ် (Spin Coupon) ၃ ခု
o ၃၀၀၀ ကျပ်အထက် = ကံစမ်းခွင့်လက်မှတ် (Spin Coupon) ၅ ခု
၆။ တယ်လီနော ၏ မည်သည့် ပက်ကေ့ချ် မဆို ဝယ်ယူပြီးသည်နှင့် ကံစမ်းမဲလက်မှတ်(Spin Count)အား MyTelenor Application ၏ ပင်မစာမျက်နှာရှိကံစမ်းမဲအစီအစဉ် ကြေညာထားသောနေရာကိုနှိပ်ပြီး ရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ကံစမ်းမဲ လက်မှတ်များကို ပက်ကေ့ချ်ဝယ်ယူထားသည့်အချိန်မှစတင်ပြီး ၄၈နာရီအတွင်း MyTelenor Application တွင်ဝင်ရောက်ရယူနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ ၄၈နာရီအတွင်း ကံစမ်းမဲလက်မှတ်(Spin Count) ရယူခြင်းမရှိသောသူများအား ၄င်းတို့ ဝယ်ယူထားသည့်ပက်ကေ့ချ်အတွက် ကံစမ်းမဲလက်မှတ်(Spin Count)များ အစား ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း၊ လျှော်ကြေး ပြန်လည်ပေးခြင်းတို့ ရှိမည်မဟုတ်ပေ။
၇။ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်း အပိုဒ် (၆)နှင့်အညီ လုပ်ဆောင်ထားသော ကံစမ်းခွင့်လက်မှတ် (Spin Coupon) အား အစီအစဉ်ပြီးဆုံးရက် အထိသာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤ ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် ပြီးဆုံးပြီးနောက် သက်တမ်းကုန်သွားသော ကံစမ်းခွင့်လက်မှတ် (Spin Coupon) အတွက် လျော်ကြေး ပြန်လည် ပေးအပ်မည် မဟုတ်ပေ။ ကံစမ်းမဲ လက်မှတ်တစ်စောင် (Each Spain Count)အတွက် MyTelenor Application တွင် ဝင်ရောက်ပြီး စက်ဝိုင်းလှည့်ခွင့် (Spin the wheel) မှာ တစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။
၈။ ကဲစမ်းမဲ အစီအစဉ် ၏ ဆုလက်ဆောင်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
SPIN and WIN (Instant Reward)
- Free Onnet SMS
- Partner Coupons (Pizza Hut, Cookie TV, Remax, Giordano and City Mall Online)
- Digital coupons to order Digital prizes from SHOP.com. Digital prizes can included:
iii. Bluetooth speaker
iv. Power Bank
၉. Free Internet Data (MB) နှင့် Free Onnet SMS (“Telco Prize”)တို့ရရှိသည့် ကံထူးသူများ အနေဖြင့် ဆု လက်ဆောင် ရရှိသည်နှင့် တဆက်တည်း ၄င်းတို့ဖုန်း၏ Internet data balance နှင့် SMS balance ထဲသို့ သက်ဆိုင်ရာ Free Internet Data (MB) (သို့) Free Onnet SMSဆု လက်ဆောင်များ ရရှိမည် ဖြစ်သည်။ Telco Prizeများအတွက် သုံးစွဲရန် အချိန်ကာလ မှာ (၃)ရက်ဖြစ်ပြီး ၊ ရရှိထားသည့် ဆုလက်ဆောင်များအား အခြား တယ်လီနော သုံးစွဲသူများသို့လွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခြင်း မပြုရ။ Free Onnet SMS ဆုလက်ဆောင် သည်လည်း တယ်လီနော သုံးစွဲသူအချင်းချင်းသာ SMS ပေးပို့နိုင်သည့် ဆုလက်ဆောင် ဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ Pizza Hut, Remax, City Mall Online နှင့် Giordanoတို ့မှ ပေးအပ်သည့် ဒစ်စကောင့် ကူပွန် နှင့် Cookie TV မှ ပေးအပ်သည့် အခမဲ့ ကြည့်ရှုခွင့် တို့အတွက် Offer ကူပွန် တို့အား မိတ်ဖက်ကူပွန်ဟု ခေါ်ဆိုမည် ဖြစ်သည်။မိတ်ဖက်ကူပွန်များမှာ ငွေကြေး အစားထိုးပေးအပ်ခြင်း မပြုသော၊ လွှဲပြောင်းအသုံး ပြုခြင်း မပြုနိုင်သော ကူပွန်များဖြစ်ပါသည်။ မိတ်ဖက်ကူပွန် ၏ သက်တမ်း၊ အသုံးပြုရမည့် ပုံစံတို့မှာ မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီ တို့၏ သဘောထား/ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ၄င်းတို့၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ အတိုင်း ဖြစ်သည်။ မိတ်ဖက်ကူပွန်များနှင့် ပတ်သက်သည့် မိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီများမှ ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း များ အား အောက်ပါ လင့်ခ် တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Telenor website Snake and Ladder link
၁၁။ Pizza Hut, Remax, City Mall Online နှင့် Giordanoတို ့မှ ပေးအပ်သည့် ဒစ်စကောင့် ကူပွန် နှင့် Cookie TV မှ ပေးအပ်သည့် အခမဲ့ ကြည့်ရှုခွင့် တို့အတွက် Offer ကူပွန် ကံထူးသူများ အနေဖြင့် သက်မှတ်ထားသည့် ဆိုင်/နေရာ/ applicationများ တွင် ၄င်းကူပွန်များအား အသုံးပြု ရမည်ဖြစ်သည်။
၁၂။ Shop.comမှတဆင့် မှာယူရမည့် အခမဲ့ ဒီဂျစ်တယ် ဆုလက်ဆောင်များ အတွက် ကံထူးသူများမှာ လက်ဆောင်မှာယူရန် လင့်နှင့်အတူ ကူပွန်ကုဒ်နံပါတ်တို့အား (“ဒီဂျစ်တယ် ကူပွန်”)လက်ခံရရှိမည် ဖြစ်သည်။ ဒီဂျစ်တယ် ဆုလက်ဆောင်များအား မှာယူရန် ကူပွန်ကုဒ်နံပါတ်နှင့် လင့်တို့အား ကံထူးသူများ၏ ဖုန်းနံပါတ်သို့ SMS မှတဆင့် ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။ ကံထူးသူမှ ဆုလက်ဆောင်မှာယူရန် အတွက် လိုအပ်သော အချက်အလက်များအား ပေးအပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒီဂျစ်တယ် ကူပွန်သည် ဆုရရှိကြောင်း အကြောင်းကြားသည့် SMS ရရှိပြီး ရရက်အကြာတွင် သက်တမ်းကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။ ဒီဂျစ်တယ် ကူပွန်အား ဆုရရှိကြောင်း အကြောင်းကြားသည့် SMS ရရှိပြီးနောက် ၁ကြိမ်သာ အသုံးပြုခွင့် ရှိမည်ဖြစ်သည်။
၁၃။ Instant Reward များအတွက် ဝန်ဆောင်မှုသုံးစွဲသူ များ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်ရှိ “My Telenor” app (Spin & Win) မှတဆင့် ကံစမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိသူ မှ ကံထူးသည်နှင့် တပြိုက်နက် ၄င်းကံထူးရှင်အား “My Telenor” app မှတဆင့် အသိပေး အကြောင်း ကြားမည် ဖြစ်သည်။ တယ်လီနောမှ ကံထူးရှင်ရရှိမည့် ဆုလက်ဆောင် ကူပွန် နံပါတ်၊ ၄င်းကူပွန်အား အသုံးပြုရန် အချိန်ကာလတို့အား ကံထူးရှင်၏ ဖုန်းနံပါတ်သို့ SMS messageပေးပို့သွားမည် ဖြစ်သည်။ ဆုလက်ဆောင် ရရှိသူများ အနေဖြင့် ၄င်းတို့ လက်ခံရရှိသည့် SMS တွင်ပါဝင်သည့် ဆုလက်ဆောင် ကူပွန်ကဒ်နံပါတ်အား တစ်ကြိမ်သာ အသုံးပြုခွင့် ရမည်ဖြစ်သည်။ နေ့တနေ့ချင်းစီအလိုက်ပေးအပ်မည့် Instant Reward ဆု၏ အရေအတွက်ပမာဏကို တယ်လီနောမှ ဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်း နေ့ တစ်နေ့တာ တွင် ပေးရန် သတ်မှတ်ထားသော ဆုအားလုံးကို ဆွတ်ခူးရရှိသူများသို့ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ပြီးမှ နောက်တွင် အဆိုပါ နေ့၏ဂိမ်းအစီစဉ်သို့ ဝင်ရောက်ကစားလာသော သူများအတွက် Instant Rewardဆုများ ချဲ့ထွင် ပြုလုပ် ပေးအပ်ရန် အတွက်တယ်လီနောတွင် တာဝန်မရှိချေ။
၁၄။ ကံထူးရှင်မှ SPIN and WIN ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်၌ ရရှိခဲ့သော ဆုမဲများ စာရင်းကို “My Telenor” app၏ History နေရာတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။
၁၅။ တယ်လီနောမှ သက်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလအတွင်း အသုံးပြုခြင်းမရှိသော လက်မှတ် နှင့် ကူပွန်များအတွက် တာဝန်မရှိပေ။ ကံစမ်းမဲ ကူပွန် ၏ သက်တမ်း၊ အသုံးပြုရမည့် ပုံစံတို့မှာ မိတ်ဖက်ကမ္ပဏီ များ၏ သဘောထား/ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ၄င်းတို့၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ အတိုင်း ဖြစ်သည်။
၁၆။ ဥပဒေ အရ အဆိုပါ ဆုလက်ဆောင်အား ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသူဟု ယူဆရန် မဖြစ်နိုင်သူများအားလည်း တယ်လီနောမှ ဆု လက်ဆောင် ပေးအပ် ရန်ငြင်းပယ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ဤစာပိုဒ်ပါ ဆုလက်ဆောင်များ ပေးအပ်ရန် ငြင်းပယ်ခွင့် ရှိသော အချက်များ အရ တယ်လီနောသည် မိမိကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ဆုလက်ဆောင်များအား ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ထိုဆုလက်ဆောင်များအား ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၁၇။ နည်းပညာချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အမှားများ၊ ပျက်စီး ဆုံးရှုံးမှုများ၊ အချိန်ကြံ့ကြာမှုများ၊ အင်တာနက် နက်ဝက် မရခြင်း နှင့် တယ်လီနောမှ ထိန်းချုပ်ရန် မစွမ်းသာသော အခြေအနေများ အစရှိသည်တို့ ကြောင့် ကံစမ်းမဲအစီအစဉ် တွင် ပါဝင် ကံစမ်းသည့်သူများ အပေါ် သက်ရောက်မှု/ဆုံးရှုံးမှု တစုံတရာ ရှိခဲ့ပါက အဆိုပါ ဆုံးရှုံးမှုများအား တယ်လီနောမှ တာဝန်ရှိသည်ဟု မှတ်ယူ ခြင်းမပြုရ။
၁၈။ တယ်လီနော (သို့) မိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီများမှ သက်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလတွင် ဆက်သွယ်၍ မရခဲ့သော ကံထူးရှင်များ (သို့) တယ်လီနော၏ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား လိုက်နာမှု မရှိသူများအား တယ်လီနောမှ သင့်တော် သည်ဟု ထင်မြင် သည့် အတိုင်း မည်သည့် ဆုလက်ဆောင် ကိုမဆို ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ထိုဆုလက်ဆောင်များအား ပြန်လည် အသုံး ပြုခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခွင့် ရှိသည်။
၁၉။ တယ်လီနော (သို့) မိတ်ဖက် ကုမ္ပဏီများမှ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အား လဲလှယ်ပေးခြင်း၊ လွှဲပြောင်းပေးခြင်း နှင့် ငွေကြေး အစားထိုးပေးအပ်ခြင်း တို့ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်။ ဆုလက်ဆောင် ရရှိသူမှ မိမိလက်အတွင်း ဆုလက်ဆောင် ရရှိသည်နှင့် တပြိုင်နက် မိမိကိုယ်ပိုင် ဆုံးဖြတ် ချက်ဖြင့် သင့်တော်သလို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဆုလက်ဆောင်ပေါ်တွင် သက်မှတ်ထားသည့် နေ့ရက်မတိုင်မီ အသုံးပြုရန် (သို့) လက်ခံရရှိရန် ပါရှိပါက ဆုလက်ဆောင် ရရှိသူမှ အဆိုပါနေ့အား ထပ်မံသက်တမ်းတိုးခြင်း (သို့) အစားထိုးခြင်း တို့ ပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုခြင်း မပြုနိုင်ပါ။ တယ်လီနောမှ ပေးအပ်သော လက်ဆောင်ပစ္စည်းများအတွက် အာမခံပေးခြင်းများ ပြုလုပ်မည်မဟုတ်။ ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်ရှိသူ မှ ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား နားလည်ပြီး လိုက်နာရန် သဘော တူညီသည်ဟု မှတ်ယူခြင်း ပြုမည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ရရှိသည့် ဆုလက်ဆောင်အတွက် အခွန်ပေးအပ်ရ ခြင်းများရှိ ပါကအဆိုပါ အခွန် ပေးအပ်ခြင်းမှာ ကံထူးသူ ၏ တာဝန်သာဖြစ်သည်။
၂၀။ ဤကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် တယ်လီနောမှ ကံထူးသူ၏ ရုပ်ပုံ၊ အသံတို့အား အသုံးပြု၍ ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယို ရိုက်ကူးခြင်း၊ အင်တာဗျူး ပြုလုပ်ခြင်း၊ လှုမှုကွန်ယက်များတွင်ဖြစ်စေ၊ အင်တာနက် ဝက်ဘ်ဆိုက် တစ်ခုခုတွင်ဖြစ်စေ ၊ ထုတ်လွှင့် ခြင်း၊ လွှင့်တ င်ခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ အခြားေြ ကာ်ငြာ လက်ကမ်းစာစောင်တွင်ဖြစ်စေ၊ ပိုစတာ တစ်မျိုးမျိုးတွင်ဖြစ်စေ ရိုက်နှိပ် ဖော်ပြခြင်းများ အားဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့်အတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိ သည်ဟု မှတ်ယူရမည် ဖြစ်သည်။
၂၁။ တယ်လီနောမှ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အခြေအနေထက်ပိုသော ကိစ္စရပ်များတွင် ကံထူးသူ ရရှိသည့် ဆုမဲများအား တယ်လီနောမှ လဲလှယ်ခွင့် နှင့် အခြား ဆုမဲများ အစားထိုးပေးအပ်ခွင့်တို့ရှိသည်။
၂၂။ ဤကံစမ်းမဲ အစီအစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်းကာ အငြင်းပွားဖွယ် တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာပါက တယ်လီနောမြန်မာ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကသာ အတည်ဖြစ်ပါမည်။
၂၃။ ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား ချိုးဖောက်သော သူတို့အား တယ်လီနောမှ ကံစမ်းမဲတွင် ပါဝင် ကံစမ်းရန် ငြင်းပယ်ခွင့်၊ ဆုလက်ဆောင်များ ပေးအပ်ရန် ငြင်းပယ်ခွင့်များ အပြည့်အဝရှိသည်။
၂၄။ ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား တယ်လီနောမှ အချိန်မရွေး ပြောင်းလဲနိုင်ခွင့်၊ ပယ်ဖျက်နိုင်ခွင့်၊ ဆိုင်းငံ့နိုင်ခွင့်နှင့် ပြင်ဆင် နိုင်ခွင့် တို့ရှိသည်။
၂၅။ ကံထူးသူမှာ တယ်လီနောမှ လိုအပ်မည်ဟု ထင်မြင်ယူဆသည့် စာရွက်စာတမ်းများအား လက်မှတ်ထိုးခြင်း၊ တင်ပြခြင်းတို့ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
၂၆။ ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများအား ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများမှ လွှမ်းမိုးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရားရုံး၏ စီရင်ပိုင်ခွင့်အောက်တွင် ရှိမည်ဖြစ်သည်။
၂၇။ ဤစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများသည် မြန်မာ၊ အင်္ဂလိပ် ၂ဘာသာရှိရာ ၄င်းတို့၂ခုကြား ကွဲလွဲမှုရှိပါက အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာ အတည်ဖြစ်သည်။
‘ရှယ်Spinရှယ်Win Luckyဗားရှင်း’ ဆိုတာဘာလဲ။
‘ရှယ်Spinရှယ်Win Luckyဗားရှင်း’ ဆိုတာ MyTelenor App တွင်သာရနိုင်တဲ့ Lucky Draw အစီအစဥ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တယ်လီနောအသုံးပြုသူများသည် ဂိမ်းဆော့ရင်း နေ့စဉ်လက်ငင်းဆုများကံစမ်းရယူနိုင်ပါသည်။
‘ရှယ်Spinရှယ်Win Luckyဗားရှင်း’ အစီအစဥ်ကို ဘယ်လိုပါဝင်ရမှာလဲ။
ပထမဦးစွာ တယ်လီနော၏ မည်သည့် Channel မှမဆို (App, USSD, SMS and E-load, etc.) Package ဝယ်ယူရပါမည်။ ပြီးရင် MyTelenor App ရှိ ‘ရှယ်Spinရှယ်Win Luckyဗားရှင်း’ ကဒ်ကိုနှိပ်ပြီး Spin (လှည့်ခွင့်) များ ရယူရပါမည်။ Package ဝယ်ယူပြီးရရှိမည့် Spin အရေအတွက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
၅၀၀ ကျပ်အောက် Spin ၁ ခါ
၅၀၀ နှင့် ၉၉၉ ကျပ် Spin ၂ ခု
၁၀၀၀ နှင့် ၃၀၀၀ ကျပ် Spin ၃ ခု
၃၀၀၀ ကျပ်အထက် Spin ၅ ခု
Package ဝယ်ယူပြီး ၄၈ နာရီအတွင်း MyTelenor သို့ဝင်ရောက်ကာ ရရှိထားသော Spin များကိုရယူရမည်။ အသုံးမပြုရသေးသော Spin များအား ကံစမ်းမဲကာလအပြီးတွင် ပယ်ဖျက်သွားပါမည်။
ရလာတဲ့ Spin တွေကို ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲ။
Spin ၁ ခုကို ၁ ခါ ဆော့ခွင့်ရှိသည်။ MyTelenor app ထဲက ‘ရှယ်Spinရှယ်Win Luckyဗားရှင်း’ ကတ်ကို နှိပ်ပြီး တန်းဆော့ရုံပါပဲ။
ရရှိသောဆုမဲများကို SMS ပေးပို့၍လည်း အကြောင်းကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်သော ဆုမဲများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
-Samsung Galaxy A20 Handsets (redeem from shop . com)
-Remax / HoCo Earphones (redeem from shop . com)
-Remax Bluetooth Speakers (redeem from shop . com)
-Remax / HoCo Power banks (redeem from shop . com)
-Pizza Hut Discount Coupons
-Cookie TV Discount Coupons
-City Mall Online Discount Coupons
-Giodano Discount Coupons
-Remax Dicount Coupons
(ဆုမဲများအားလုံးကို ပရိုမိုးရှင်းကာလအပြီး နောက် ၇ ရက်အတွင်း ထုတ်ယူရန်လိုအပ်ပါသည်။)
ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့ထိ ဖြစ်ပါသည်။
MyTelenor App Version 3.13 တွင်သာဝင်ရောက်ဆော့ကစားနိုင်ပါည်။
MyTelenor App ကိုဘယ်မှာရယူနိုင်မလဲ။
-Direct download link (only for android) http://bit.ly/2HlQ003